किन हराउँछन् पर्यटक ? - Karobar National Economic Daily
query_builderJuly 28, 2017 12:14 PM supervisor_accountनिनाम लोवात्ती कुलुङ visibility526
गत वैशाखमा धादिङ–रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा पर्ने रुवीभ्याली घुम्न गएका ताइवानी पर्यटक जोडी लाइङ सिङ युन र लिउ चेन चुन ५४ दिनसम्म बेपत्ता भए । हिमपातका कारण जमेको बाक्लो हिउँमा चिप्लिएर लडी उनीहरू २ सय मिटर तल खसे । ५५ औं दिनमा उनीहरूको उद्धार भएको थियो । लिउ चेन चुनले ज्यानै गुमाए भने उनका प्रेमी लाइङ सिङ युनको भने ५५ औं दिनपछि जीवितै उद्धार भयो ।
नेपाल घुम्न आएर हराएका पर्यटक उनीहरू नै पहिलो भने होइनन् । पर्यटक प्रहरी कार्यालयका अनुसार ०६९/७० देखि हालसम्म हराएका÷बेपत्ता भएका पर्यटकको संख्या ६२ पुगेको छ । २०३७ चैत १ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका पर्यटक जोडी ओल्फगाग र हेनरिखे सोही वर्षको कात्तिकमा पोखरा–जोमसोम–साल्दाङ–छार्काभोट–दुनै–ढोरपाटन–पोखरा घुम्न जाँदा हराएका थिए ।
उनीहरूको खोजी गर्दा छर्का भोट गाउँको एक ओढारमा मृत अवस्थामा भेटिएको थियो । उनीहरूलाई स्थानीय केही व्यक्तिले पैसा र सरसमानको लोभमा हत्या गरेका थिए । तर, अचम्म के भने त्यो बेला विदेशीहरूलाई माथिल्लो डोल्पा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यस्तै, २०६० मा पनि श्रीलंकाली मूलका बेलायती पर्यटक एलेक्स रत्नासोथी जिरी हु“दै खुम्बु जाने क्रममा खरिखोलामा लुटिएपछि अरुण–भ्यालीतर्फ लागेका थिए ।
उनी धेरै लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएपछि उनकी दिदी एना नेपाल आई खोजी कार्यमा लागेकी थिइन् । तर, एलेक्स भेटिए–नभेटिएको बारेमा कतै कुनै समाचार छापिएन । नेपालको राजधानीको मुटुमै रहेको रानीवनमा पनि २०६१/२०६२ फ्रेन्च र जर्मन महिलाद्वय सेलिना र ग्रुन्ची हराए । सन् २००९ अप्रिल तेस्रो साता इरानकी महिला नेपाल घुम्न आउँदा हराएका आफ्ना श्रीमान् महमुद हरारीको खोजीमा आएकी थिइन् । सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा पोखराको ड्याम साइडबाट एक जापानी पर्यटक पनि हराएका थिए ।
ती हराएका जापानी पर्यटकका बुबाले पनि छोरोको सास वा लास भेटेमा एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए । तर, तिनको पनि पत्तो लागेन । त्यस्तै सन् २०१५ मा भूकम्पबाट क्षति भएको गोरखा क्षेत्रमा उद्धारमा खटिन आएकी इजिप्सियन मूलकी अमेरिकी महिला डालिया याहिलालाई पोखराका एक नेपालीले केही धन र यौनको लोभमा हत्या गरे ।
त्यसैले विदेशी पर्यटकको सुरक्षा र नेपालीहरूको रोजगारीका लागि पनि ‘एक पर्यटक, एक नेपाली’को नीति लागू गरिनुपर्छ । मैले यो आवाज उठाएको धेरै भयो । सबै मान्छेको मन सफा हु“दैन । त्यसमाथि नेपालको भूगोल पनि यी झोले पर्यटकका लागि प्रतिकूल छँदै छ । हिजोआज भने टानलगायत पर्यटन व्यवसायीहरूका विभिन्न संस्थाले पनि यो माग सरकारसमक्ष राख्न थालेका छन् ।
यो खुसीको कुरो हो । झट्ट हेर्दा पर्यटकको अलिकति खर्च त बढ्ला नै । तर, उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् भने ढुक्कस“गले घुम्न पाउ“छन् र नेपालबारे अरू बढी जानकारी लिन सक्छन् भने किन कन्जुस्याइ“ गर्ने ? यस्तो नीति–नियम भुटान र चीनले पनि लागू गरेका छन् । भुटानले त वर्षमा निश्चित संख्यामा मात्रै विदेशी पर्यटक भिœयाउँछ ।
नेपालमा पनि अनिवार्य गाइडको नियम लागू गर्न सके विदेशी पर्यटक हराउने र कहिल्येै नभेटिने जुन समस्या छ त्यो पूर्णतः हट्छ । तर, यसका विरुद्धमा नेपालमा रहेका दातृ निकायमा कार्यरत व्यक्ति, केही आईएनजीओ÷एनजीओ तथा नेपालमा आपूmखुसी ट्रेकिङलगायतका पर्यटकीय प्याकेज बेचेर गैरकानुनी ढंगले प्रशस्त कमाइ गरिरहेका विदेशी गाइडहरूले समेत एक स्वरमा मानवअधिकारको कुरो गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको भित्री उद्देश्य भने आफूखुसी डलरदाताहरूलाई गाउ“–गाउ“ घुमाउनु, टे«किङ गराउनु आदि नै हो ।
पर्यटक नुवाकोट हिमपात धादिङ–रसुवा